जो दु:खमा पनि हाँसेर तिमिलाई हँसाउँछिन् उनी हुन् ‘आमा’..,आमालाई माया गर्नुहोला ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/जो दु:खमा पनि हाँसेर तिमिलाई हँसाउँछिन् उनी हुन् ‘आमा’..,आमालाई माया गर्नुहोला !
जो दु:खमा पनि हाँसेर तिमिलाई हँसाउँछिन् उनी हुन् ‘आमा’..,आमालाई माया गर्नुहोला !
जो दु:खमा पनि हाँसेर तिमिलाई हँसाउँछिन् उनी हुन् ‘आमा’..,आमालाई माया गर्नुहोला ! कुनै एकान्त ठाउँ*मा गएको बेला आमा सम्झे मन रुन्छ । नजिक भए खुसीका अनि टाढा भए वेदनाका आँसु र्झछन् । त्यो आमा प्रतिको गहिरो प्रेम भएर नै हो। एक विश्वचर्चित व्यक्ति एवं अमेरिका*का १६ औं राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले भनेका छन्-’आमाको काखमा भएको मान्छे कहिल्यै दुःखी हुँदैन। आमा एउटा सन्तान*को लागि प्रेम र विश्वासको बास्केट हो।
एउटा भनाइ छ-’प्रेम र विश्वासको बास्केटमा हिंसाले कुनै ठाउँ पाउँदैन ।’ आमा*बाट हिंसा हुने कुरा कल्पना बाहिर हुन्छ। साँच्चै भन्ने हो भने आमा छोडेर कतै गएमा एक्लो वा केही न केही अभाव भएजस्तो महसुस हुन्छ । आमा संसार हो। संसारमा सबै कुरा पाइन्छ तर आमा पाइँदैन । आमा सन्तानको ढुकढुकी हो। बालबालिका*को आशा र भरोसा हो। अनि समाजको गहना हो। आमाबिनाको परिवार खल्लो हुन्छ।
आमाको बारेमा शब्दमा भूमिका बाँधेर केही लेखेरमात्र पुग्दैन। यसको वर्णय गरी साध्य छैन। आमाबिनाको जीवन पानी बिनाको माछा जस्तै हुन्छ। जहाँ आमा, त्यहाँमात्र राम्रो सपना देख्न सकिन्छ। आमाबिनाको जीवन मरुभूमिजस्तै हो। जहाँ मनले खुसी हात पार्न सक्दैन। आमा सन्तानको लागि महादेवता हुन्। आमाको बारेमा मातातीर्थ औंसीको दिनमात्र गुणगान गाएर आमाको भलो हुँदैन। आमालाई हेला गर्ने सन्तानलाई कुनै न कुनै समयमा नराम्रो आइलाग्छ।
कैयौं पीडा सहेर जन्म दिने भनेकै आमाले हो। आफ्नो दशधारा दूध पिलाएर नाना ताते गर्दै हुकाउने पनि आमाले हो। सबैभन्दा पहिलो माया साटासाट गर्ने वर्ग पनि आमा नै हो। पिठ्युँमा घाँसपातको भारी अनि भारीमाथि नानी-बाबु लाई बोकेर घरगोठ गराउने पनि आमा नै हुन्। बालकको चौतर्फी विकासको विषयमा गहिरो व्यवहारिक चिन्तन दर्शाउने वर्ग पनि आमा नै हो।
आमा*लाई जवानीमा त्यति धेरै माया दिने नदिने सन्तानको कुरा हो तर साथ दिनु पर्दछ। जब आमा कमजोर हुँदै जान्छिन्, आमाको हेरविचार एवं स्याहार सहयोगमा कत्ति पनि कमी आउन दिनु हुँदैन। भनाइ छ, अरुको लाखभन्दा आमाको काख नै प्यारो हुन्छ। संसारको सबैभन्दा रमाइलो समय भनेको आमाको फरियामा बेरिदा एवं काखका कोकोहोलो गर्दा हुन्छ । आमाले यस संसारमा जन्म दिनुभएको छ । त्योभन्दा ठूलो आमाको महिमा गर्ने अरु केही छैन।
आमा जीवन*को ज्योति हो। मायाको सागर हो। जीवन*को पहिलो प्रभावकारी ज्ञानरुपी पाठशाला पनि हो।
सर्वसाधारणले प्रहरीलाई अटेरी गर्दै लखरलखर डुलेकै कारण समुदायमा कोरोनाको फैलियो
आजबाट राति ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म हिँडडुल गर्न नपाइने
BREAKING : लकडाउन वैशाख १५ गतेसम्म बढाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय